Iisandi: Ingxolo ecaphukisayo | IPhone iindaba
Iisandi: Ingxolo ecaphukisayo
I-NervSounds isivumela ukuba sivelise ukuya kwi-4 eyahlukileyo "enomsindo" ingxolo. Kukangaphi usitya isidlo sangokuhlwa kwaye uve ingxolo ecaphukisayo yemfoloko esityeni? Ngalesi sicelo ungazidlala njengoko unomdla wokudlala iziqhulo ezicaphukisayo kubahlobo bakho.
Ungayifumana kwiVenkile ye App ngale nto unxibelelwano mahhala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Iisandi: Ingxolo ecaphukisayo
Ukuphuhlisa kwi-iPhone (5): isicelo sethu sokuqala (III)
Ukuphuhlisa kwi-iPhone (4): isicelo sethu sokuqala (II)